Bashayelwe ukubuza indlela abase-Sweetwaters | News24
Bashayelwe ukubuza indlela abase-Sweetwaters
UMduduzi Mdunge oshaywe walinyazwa kanzima esolwa ngokweba e-Hilton.ISTHOMBE : sithunyelwe
ABAFANA ababili baseSweetwaters bathi bafuna ubulungiswa emva kokuba beshaywe balinyazwa kanzima abesilisa bebala elimhlophe bebasola ngokuba amasela ngoMgqibelo ekuseni mhla zingama-26 kuNhlaba (May) e-Hilton.
UMduduzi Mdunge (19) nomngani wakhe uSimphiwe Mdletshe (17) abafunda esikoleni iSyanda High School khona e-Sweetwaters bebephuma emsebenzini e-Port and Barrel khona e-Hilton lapho besebenza njengabantu abaqoqa amabhodlela kanye nezingilazi ngezimpelasonto ngesikhathi behlelwa ilesi sigameko.
Elandisa i-Echo uMduduzi uthe kwakuyisikhathi sehora lesihlanu ekuseni ngesikhathi behlelwa lo mshophi.
“Isikhathi sethu sokuphuma emsebenzini kwaku-4 ekuseni ngalolu suku kanti sihamba ngezinyawo njalo uma siya noma sibuya emsebenzini. Sasesisendleleni eya emakhaya sesingase-Cedara ngesikhathi sithole ucingo komunye esisebenza naye ethi ucela sijike size lapho ehlala khona eHilton. Sijikile sabuyela emuva nokuthe uma sisendleleni sabona ukuthi sidukile asiyiboni indlela eya la kumele siye khona.
“Kube sekuqhamuka owesilisa webala elimhlophe ehamba ngesithuthuthu wasibuza ukuthi sifunani samtshela ukuthi silahlekile sicela asisize asiyalele ukuthi sihamba ngalaphi. Walile ukusisiza wahamba wasishiya saqhubeka sahamba kanti sizohlangana naye esilinde ngaphambili.
“Ube esesitshela ukuthi asime washaya ucingo sabona sekufika abangani bakhe behamba ngezimoto abanye babo bephethe izibhamu. Babe sebeqala besisola ngokugqekeza komunye umuzi khona eHilton. Sizamile ukubachazela ukuthi asazi lutho thina siziphumela emsebenzini kodwa abazange basilalele bavele basigibela ngesibhaxu besithuka.Into engiyikhumbulayo nje ngesikhathi beqala bengishaya bebengikhahlela ngamaquzu ngemuva kwalokho ngaphaphama esibhedlela i-Northdale ngilimele kanzima ekhanda nasesiswini njengoba ngithungiwe nasemlomeni” kubeka yena.
UMduduzi uthi lesi sigameko asimuphethe neze kahle kangangokuba ngeke aze akuthole ukuphumula kuze kuboshwe abenzi bobubi.
“Ngiphuthwe nawukubhala izifundo ezimbili zephepha lesiZulu neSingisi ngoMsombuluko ngenxa yokuthi bengingekho esimweni sokubuyela esikoleni. Nasebusuku angikwazi ukulala kahle ngihleli ngiphupha lesi sigameko.
“Ngivele ngithuke ngingasakwazi ngisho ukulala ngize ngisizwe amaphilisi. Bengizitshela ukuthi sesiphila esikhathini senkululeko kodwa uma kwenzeka izinto ezifana nalezi ngiyathuka,”kubeka yena.
USimphiwe uthe namanje usaphatheke kabi ngale sehlakalo esibavelele futhi bavule icala.
“Mina ngaba nenhlanhla angilimalanga kakhulu ngaquleka nje ngemuva kokuba bengikhahlele ngawa ngashayeka ngekhanda phansi. Okubuhlungu ukuthi sashayelwa into engekho ngoba nalesi sigameko sokugqekeza kuthiwa senzeka ngezikhathi zehora lesibili ekuseni ekubeni thina saphuma emsebenzini ngehora lesine.
“Sifuna kwenzeke ubulungiswa ngoba sesitholile nokuthi imiphumela yama-finger prints iyaveza ukuthi akuthina esagqekeza lapho kuthiwa sagqekeza khona,” kubeka yena.
Okhulumela amaphoyisa eMgungundlovu u-Sergeant Mthokozisi Ngobese ukuqinisekisile ukuthi kuvulwe icala lokushaya kanzima esiteshini samaphoyisa sase-Hilton kodwa bekungakaboshwa muntu.
Plattekloof 18:06 PM